Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 9.3.3 uye OS X 10.11.6 | IPhone nhau
Sezvataitarisira, Apple nhasi yatanga iyo yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 9.3.3. Kuburitswa uku kwakaitika mazuva gumi nemana mushure mekutanga kweyekutanga beta yeruzhinji uye zuva rimwe chete mushure mekuburitswa kweyekuvandudza vhezheni. Iyo yekudzoresa yave kuwanikwa kuburikidza neOTA yevashandisi vese vaive neyekutanga yeruzhinji beta yeIOS 14 yakaiswa uye, kana usati watoita izvozvo, ichakurumidza zvakare kuoneka paTunes.
Semazuva ese, ndikuudze izvozvo hatikurudzire kuisirwa yeichi kana chero imwe software muchikamu chekuyedza kunze kwekunge iwe uchiziva zvauri kuita kana kufungidzira njodzi dzatingatarisana nadzo kana tichiisa itsva vhezheni yesoftware muchikamu chebeta. Zvingangodaro, zviputi zvisingatarisirwi zvichaonekwa, sekuvhara maficha, kutonhora uye mamwe matambudziko anotsamwisa. Zvakare, kuve diki yekuvandudza, iyi nyowani vhezheni haina kukodzera kuyedza kunze kwekunge uine yapfuura beta yakaiswa uye uri kusangana nedambudziko raunoda kubvisa.
Nyowani yeruzhinji betas yeiyo iOS 9.3.3 uye OS X 10.11.6
Panguva imwecheteyo neiyo nyowani beta yeApple, Apple yatanga zvakare beta nyowani yeimwe inoshanda sisitimu iyo inoita kuti zvive nyore uye yaita kuti iwanikwe kune chero munhu anoda kuyedza yechipiri yeruzhinji beta yeOS X 10.11.6. Panguva ino isu tinofanirwa kutaura zvakangofanana neiyo nyowani beta yeIOS: hazvina kukodzera kuyedza vhezheni itsva mubeta kutoti isu taziva zvatiri kuita, kunyanya kana iri diki yekuvandudza.
Zvingangodaro, Apple icharamba ichiburitsa vhezheni kupurinda masisitimu, asi zvine musoro kufunga kuti zvinhu zvese zvakanaka zviri kutochengetwa kuIOS 10 uye OS X 10.12, senge chishandiso cheMusic chitsva paIOS kana Siri paOS X .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inotangisa yechipiri yeruzhinji beta yeIOS 9.3.3 uye OS X 10.11.6
Mazvita, ndinazvo kubvira nezuro, ndinoona kushomeka kushoma,